Umkhiqizi we-China Quality HDMI Cable, Factory - Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ikhebula le-HDMI
Ama-Connexions ahlinzeka nge-ATC evunyelwe i-HDMI Cable enokuhlangenwe nakho okubanzi ngaphezu kweminyaka eyi-17years. Le Cable ye-8K HDMI enezinga eli-2.1 isizukulwane sakamuva kakhulu esinencazelo ephezulu kakhulu nejubane eliphezulu lama-48Gbps. Besilokhu sizinikela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nokuhlinzekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu.
I-CTC Connexionsâ „¢ 4K HDMI Cable ifaka isizukulwane esilandelayo sobuchwepheshe bekhebula le-HDMI 2.0. Iletha umkhawulokudonsa we-18Gbps futhi isekela ukudluliswa kwevidiyo ye-Ultra HD HDMI ngezixazululo zevidiyo kuze kufike ku-4K @ 60Hz. Umkhiqizi wesipiliyoni se-OEM / ODM oneminyaka engu-17 ene-ISO9001: 2015.
I-CTC Connexionsâ „¢ 4K Micro HDMI iye ku-HDMI Cable ikuvumela ukuthi usakaze umsindo nevidiyo kusuka kukhamera, i-GoPro, ithebhulethi noma ilaptop ene-Micro HDMI Port iye ku-4K UHD TV yakho noma iprojektha enembobo ye-HDMI.
Singabakhiqizi nabahlinzeki be- Ikhebula le-HDMI abaqeqeshiwe e-China, abakhethekile ekunikezeni insizakalo eyenziwe ngezifiso. Uma uzothenga ikhwalithi ephezulu ye- Ikhebula le-HDMI esitokweni, wamukelekile ukuthola ikhotheshini efektri yethu.